Flyer - Fanorenana Fanamarinana - Fitiavana, firaisana ary ny Internet
Ity pejy ity dia manome fahafahana miditra ao amin'ny Flyer Foundation Reward izay mamaritra izay ataontsika. Ity famoahana ity dia navoaka tamin'ny Jolay 2017.
Ao amin'ny The Reward Foundation dia manome fampahalalana siantifika mora azo sy takatra ho an'ny rehetra momba ny fitiavana, ny firaisana ary ny Internet. Ampiasao ary zarao ny ravinay, fa ekeo izahay fa loharanon'izany. Mampiasa ny lisansa Creative Commons CC-BY-ND izahay.
Ity fahazoan-dàlana ity dia mamela ny fizarana indray, ara-barotra sy tsy ara-barotra, raha mbola ampandalovina tsy miova sy amin'ny ankapobeny izany, miaraka amin'ny trosa The Reward Foundation. Raha hijery ny taratasy fahazoan-dàlana dia tsindrio azafady Eto. Raha hijery ny code legal dia tsindrio azafady Eto.
Download ny Flyer
Tsindrio ity rohy ity raha hidina Ny Flyer Foundation Flyer…